Ahoana ny fomba hisorohana ny alika tsy hiditra amin'ny fandriana | Tontolo alika
Anisan'ny fianakavianay ny biby fiompinay, fa noho izany dia tsy maintsy mametra azy ireo koa isika. Amin'ny fotoana maro, ny alika mananika ny seza fandriana tsy nahazo alalana taminay, nahatonga azy io ho toerana ankafizinao fa tsy anay. Na izany aza, azo sorohina izany raha hainao ny fomba.
Sakano ny alika amin'ny miakatra eo ambony sezalà Mety ho zavatra sarotra izy io, indrindra satria mety nahazoan'izy ireo izany ho fahazarana. Fa ilaina izany mahareta ary mihetsika amin'ny fomba iray hahatratrarana ny vokatra tadiavina. Ireto misy toro lalana vitsivitsy ho anao mba hahatonga ny sezanao ho lasa toerana ho anao indray.
Raha ny mahazatra dia mihetsika ny alika a rafitra valisoa, fianarana amin'ny alàlan'ny fanamafisana tsara na ratsy. Raha lanintsika mandritra ny andro ny fananarana azy ireo dia ho hitantsika fa, rehefa avela irery izy ireo, dia ho hitan'izy ireo ny fiakarana ny sofa ho valisoa, satria tsy misy ny mibedy. Izany no antony tsy maintsy ataontsika rehefa any an-trano isika, tsy manahy be loatra ny amin'ny manaraka, satria amin'izao fotoana izao dia tsy voafehy izany.
Misy izany manamafy tsara ny fihetsika tiana haverina, na dia tsy izany aza. Izany no antony tsy maintsy hametrahantsika toerana mety eo akaikin'ny sofa, izay takatr'izy ireo ho toerana misy azy ireo. Raha miakatra izy dia arotsaho ary apetraho eo am-pandrianao. Tsy maintsy ataonao imbetsaka ilaina izany. Rehefa hitantsika fa mijanona eo amin'ny toerany ihany izy io, dia tsy maintsy omentsika valisoa, amin'ny fitsaboana na kilalao.
Tsy maintsy maharitra ianao, ary ataovy isan'andro, mba hampiasan'izy ireo izany ary hataony foana, na dia tsy eo aza izahay. Ho fanampin'izay, ny farafaran'ny biby fiompinay dia tsy maintsy mahazo aina be, mba tsy ho tian'izy ireo ny seza tanana. Farany, aza adino fa mila fotsiny ianao omeo fitiavana izy rehefa tsy tafakatra ambony sezalava ry zareo.
Fanazavana fanampiny - Ahoana no hampiofanana alika be fanahiana amin'ny sakafo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hisorohana ny alika tsy hipetraka eo amin'ny sezalava
Tombony azo amin'ny fanatanjahan-tena ho an'ny alikanao
Ny fomba hitsaboana ny ratra alika ao an-trano